Madaxweyne C/weli Gaas oo xeelad cusub lasoo baxay & Musharaxiintii kale oo quusan doona hadii uu gacanta ku dhigo ninkii ay…. – Radio
January 6, 2019	973	Like
Garoowe (Codka Nabadda) Madaxtooyada Puntland ee magaalada Garowe ayaa waxaa maanta ka dhacay kulan xasaasi ah oo albaabadu ay u xidhnaayeen, kaas oo u dhaxeeyey madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas, gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland C/xakiin Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed), labadiisa ku xigeen Abukaate C/casiis Cabdullaahi Cismaan iyo Ismaaciil Maxamed Warsame.
Shirkani oo warbaahintu ay dibed joog ka ahayd ayaa waxaa lagaga hadlay arimo badan oo ku aadan doorashada madaxtinimada Puntland, waxaana madaxweyne Gaas uu ugu hambalyeeyey gudoonka cusub ee Baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen xilalka ay loo doortay.
Madaxweynaha ayaa gudoomiyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa sidoo kale kala hadlay qabsoomida doorashada, waxaana ugu dambeyntii Qasriga madaxtooyada iskugu soo hadhay madaxweyne Gaas iyo gudoomiye Dhoobo Daareed sida ay sheegeen qaar kamid ah xubnihii la socday.
Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas ayaa haatan xooga saaraya in uu mar kale noqdo hogaamiyaha Puntland, waxaana uu dadaal badan u bixinayaa kala qaybinta xildhibaanada Baarlamaanka si uu u helo codad badan halka uu halgan dheer ugu jiro gacan ku dhigista gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland C/xakiin Maxamed Axmed (Dhooba Daareed) iyo labadiisa ku xigeen oo iyaguna saameyn xoogan ku leh Baarlamaanka cusub.
Gudoomiye Dhoobo ayaan weli si rasmi ah loo ogeyn halka uu salka dhigan doona maadaama dhinacyada kuwada dirirsan xilka madaxtinimada Puntland uu mid walbaaba xidhiidh dhow la leeyahay, balse madaxweyne Gaas ayaa haatan xooga saaraya in uu hanti badan dul dhigo si uu ugala wareego musharaxiinta kale.
Shakhsiyaadka ay ku adkaan doonto gadashadooda madaxweyne Gaas ayaa ah labada gudoomiye ku xigeen oo si weyn u dhaliilsan xukuumaddiisa, waxaana xusid mudan in gudoomiye ku xigeenka labaad ee Baarlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame uu iska casilay bishii 13-kii June ee sanadkii 2015 xilkii wasiirka Cadaalada Puntland oo uu Gaas u magacaabay xiligaas oo uu bilowmay dagaalka u dhaxeeya isaga iyo madaxweyne Gaas.
Rajada kaliya ee uu xiligani leeyahay madaxweyne Gaas ayaa ah in uu garab ka helo gudoomiye Dhoobo Daareed, taas oo ay adag tahay suurta galnimadeeda maadaama indho kale aysan lahayn musharaxiin badan.
Boosaaso (Codka Nabadda) Xili maanta ay si rasmi ah u bilaaban doonto diiwaan gelinta musharaxiinta ...